Posted by သက်ဝေ at 1:45 AM
MN June 23, 2011 at 1:57 AM
Bravo Ma Thet Wai...
Happy to see your new post...
Iora June 23, 2011 at 3:04 AM
ချစ်ဦးညို ရဲ့ ဒဿဂီရိ ကိုတင်ပြသလိုမျိုးခံစားရပါတယ်။ ပြောင်းပြန်ပေါ့။ ကုိုယ်ကတော့ စာခြေက်ရုပ် ကုိုသနားနေမိတယ်။ စာခြောက်ရုပ်အစား အခြားအရာနဲ့ တင်စားလိုက်စေချင်မိတယ်။ စာခြောက်ရုပ်က သူ့ အကျိုးမပါဘဲ ကပြနေရတာလို့ ခံစားရတယ်။ ကုိုယ်က ထူးထူးဆန်းဆန်း စာခြောက်ရုပ်တွေကို ချစ်တတ်တဲ့သူမို့ လို့ ပါ။ အရေးအသားကတော့ ဆိုဖွယ်ရာမရှိ။ ကြိုက်ပြီးသား။
မေဓာဝီ June 23, 2011 at 3:27 AM
အပေါ်က Iora ပြောသလိုပဲ ... ညီမလဲ စာခြောက်ရုပ်ကလေးတွေကို သနားတယ်။
ဒါပေမဲ့ အမသက်ဝေ ရေးတာကောင်းတော့ စာခြောက်ရုပ်က အသက်ဝင်သွားပြီး အဲဒီ စာခြောက်ရုပ်နေရာမှာ တခုခုကို အစားထိုး ခံစားလိုက်တယ်။
Nyi Linn Thit June 23, 2011 at 4:35 AM
ဟိုတလောတုန်းက အိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ စိုက်ခင်းတွေ ထဲမှာ စာခြောက်ရုပ်အစား တောကျီးကန်း အသေတွေ ကို ကြိုးနဲ့ချည်၊ တိုင်မှာ ချိတ်ပြီး စာခြောက်တာ လမ်းသွားလမ်းလာတွေ ရဲကိုဝိုင်းတိုင်ကြလို့ ပွဲဆူသွား သေးတယ်၊ မသက်ဝေရဲ့ စာခြောက်ရုပ်ကတော့ မတူတဲ့ မြင်ထောင့်တွေအောက်မှာ တဟီးဟီး တဟဲဟဲနဲ့ ခြောက်လှန့်ကောင်းတုန်း ထင်ပါရဲ့...။း)
Hmoo June 23, 2011 at 4:53 AM
Scare crow is doing what it has to do.If birds are not afraid of it and enjoy around......What's the meaning of being scare crow?
Hmoo June 23, 2011 at 7:26 AM
T T Sweet June 23, 2011 at 9:38 AM
စာခြောက်ရုပ် ...စာခြောက်ရုပ် .... နောက်ဆုံးစာကြောင်းကို ဖတ်လိုက်မှ တစ်စုံတစ်ခု တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သွယ်ဝိုက်ရေးထားသလိုပဲ ... ၀င်္က၀ုတ္တိအလင်္ကာနဲ့ ရေးထားတာလားလို့ ... နဲနဲတော့ ပေါက်သလိုပဲ ...
phyu June 23, 2011 at 9:55 AM
Hi Ma Thet,
very good poem,we need not worry the time will come for him.
မြူးမြူး June 23, 2011 at 10:18 AM
စာခြောက်ရုပ်တွေ သင်ခန်းစာရသင့်ပြီ.. ရှေ့မှာလဲ သာဓကတွေရှိပါရက်နဲ့ မမြင်နိုင်လောက်အောင် ဘာတွေကများ သူတို့မျက်လုံးတွေကို ကန်းစေခဲ့တာလဲလို့တွေးမိတယ်..
မိုးငွေ့...... June 23, 2011 at 11:02 AM
စာခြောက်ရုပ်ရဲ့ ဘ၀သရုပ်ကို ပီပီပြင်ပြင် ရေးသားပြသသွားနိုင်တဲ့ အစွမ်းကတော့ မမသက်ဝေတို့ပညာပဲ........။ တကယ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာရှည်တစ်ပုဒ်ပဲ...။
ပန်းချီ June 23, 2011 at 11:36 AM
♫♪ ဟေးးးး..စာခြောက်ရုပ်ကလေးရာ..ငါနောက်ဆုတ်မပြေးပါ... မင်းဆီကိုအရောက်လာ ငါ့ချစ်သူအကြောင်းရာ....ကောင်းကောင်းကြီးပြောပြမယ်ကွာ..ကြားချင်သလား..နား.ဆင်.ထား.ရှက်မသွားနဲ့ကိုယ့်ဆရာx2 ♪♫
အဲဒီသီချင်းလေးကို သတိရစေတယ်လို့ သိလား မမး)
ဆိုးဆိုးဆတ်ဆတ် လှုပ်ရှားရင်း မိုးတိုးမတ်တပ်ကနေတောင် ရယ်တတ်သေး…(ချစ်စရာ့ ကာရန်လေး)
sophia khant June 23, 2011 at 11:39 AM
စာခြောက်ရုပ်တွေကြားထဲမှာနေနေရင်းနဲ့ ကိုယ်ပါစာခြောက်ရုပ်ဖြစ်နေပြီလားလို့ အထိတ်တလန့်တွေးမိတယ်....။
သက်ဝေ June 23, 2011 at 1:01 PM
လာဖတ်တဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... တကယ်တော့ စာခြောက်ရုပ်က အပြစ်ကင်းပါတယ်... ရုပ်ဆိုးအောင် ဆင်ပြင်၊ ထားရာမှာနေပြီး ခိုင်းတာကို ဆင်ခြင်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းမရှိပဲ လုပ်နေရတဲ့ ကံကြမ္မာက မကောင်းတာပါ...။ အဆင်ပြေသလို ကိုယ်တွေးချင်တဲ့ဖက်က တွေးချင်သလိုသာ လှည့်တွေးသွားကြပါ...း))))
Mon Petit Avatar June 23, 2011 at 2:02 PM
Thank you Ma Ma Thet Wai for composing this poem, that makes me think of "what am I?". Am I the scarecrow? Am I the one laughing at scarecrow?
မအိမ်သူ June 23, 2011 at 2:12 PM
ပင်ကိုယ်သဘာဝ စာခြောက်ရုပ်ကလေးတွေကတော့ အပြစ်ကင်းကြပါတယ်အမရေ.. သခင်တွေကသာ စိတ်ယုတ်မာတွေနဲ့ အပင်းသွင်းကြလို့ စာခြောက်ရုပ်ဘ၀ ကနေ လူခြောက်ရုပ်ဘ၀ဖြစ်သွားကြတာ..
seesein June 23, 2011 at 2:32 PM
ကဗျာစပ်တဲ့ မသက်ဝေ တော်တယ်ဗျို့
SHWE ZIN U June 23, 2011 at 4:07 PM
တချို့ က သိသိကြီးနဲ့ မိုက်ကြတယ်
ညိမ်းနိုင် June 23, 2011 at 8:10 PM
IDIOT-Ki June 23, 2011 at 8:18 PM
အဲ့လို စာခြောက်ရုပ် နှစ်ကောင်ကို အရုပ်ကြိုး မပြတ်ခင်မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထားပြီး တကောင် နဲ့ တကောင် ခြောက်လှန့် ကြည့်ခိုင်းချင်လိုက်တာ ။ သူတို့ အလှည့်ကျ ဘယ်လိုခြောက်လို့ဘယ်လောက် လန့်ကြမလည်းလို့ လေ..
လိုရာဆွဲတွေးပြီး စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်သွားတယ် မသက်ဝေ ရေ...
ကိုယ်တိုင်လည်း စာကလေး မဖြစ်ပါရစေနဲ့ လို့..
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) June 23, 2011 at 10:40 PM
အင်းလေ.. သူတို့ကကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်မရှိဘဲ ခိုင်းတာ လုပ်နေရတာကိုး
ဒါနဲ့တောင် ဘ၀င်က ခပ်မြင့်မြင့်ရယ်။
တစ်ချိန်ချိန်မှာ လောကကြီးက ဒဏ်ခတ်မှာ စာခြောက်ရုပ်တွေ မသိရှာလို့လား သိသိကြီးနဲ့များလား.....
ဘဝအစိတ်အပိုင်း တချို့ စုစည်းရာ June 24, 2011 at 8:48 AM
ရေးထားတာ အရမ်းကိုအသက်ဝင်တယ် မ။
ကျမ ကတော့ ဖတ်နေရင်း စာခြောက်ရုပ် ကဇာတ်ကောင်နေရာက ပျောက်သွားပြီး လူတွေ အစားထိုးဝင်လာတယ်။ ကျမ ကိုယ်တိုင်လည်း စာခြောက်ရုပ် နေရာ ဝင်တွေးလို့ တွေးပေါ့။း)
agree with lora.. I like sarchaulyoke.. He isapartner of framer in the field..